बाइक दु’र्घ’टना खुट्टा भाँ’चिए पनि कोरोना का बिरामीको सेवामा निरन्तर खटिँदै डाक्टर भण्डारी ! – Sandesh Press
May 4, 2021 71
Inspirational Medical Personnel: He is T.R. Bhandari, Medical Personnel from Rapti Academy of Health Sciences (RAHS) Ghorahi who has been doing his regular duty despite of his Leg fracture.
उहाँको केही महिना अगि बाइक दु’र्घ’टनामा खु’ट्टा भाचिएको थियो! यद्यपि आफ्नो स्वास्थ्य ठिक नहुदा नुहुदै पनि अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै रेगुलर डिउटि गर्दै हुनुहुन्छ!
**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
नेपाल टेलिकम एनसेल सिममा फोन व्य’स्त हुँदा , फोन सम्पर्क नहुँदा, स्विच अफ हुँदा वा कुनै का’रणले सम्पर्क नहुँदा अथवा अन्य सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाइ हामी सबैले सुन्दै आएका छौ । उनीहरूले दिने रेकर्ड गरिएका सन्देश सुनेर हामीहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरू झर्को मानेका हुन्छन्
तर केही मानिसहरूलाई उनीहरू को हुन्, कहाँका हुन् मनमा जिज्ञासा लागी रहेको हुन्छ । “तपाइले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ । केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला । यो आवाज नेपाल टेलिकममा सुनिने यो आवाज अनुपा कर्माचार्यको हो । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि सन्देश रेकर्ड गराउन कलाकारको खोजी गरेको थाहा पाएपछि
उनले आफ्नो स्वर रेकर्ड गरेर पठाइन्। अरू केही कलाकारसँगै उनको स्वर पनि छानियो।उनै कर्माचार्यको स्वर अहिलेसम्म पनि बजिराखेको छ। त्यस्तै टेलिकममा बज्ने स्वरमध्ये भूमिका थापाको स्वर पनि हो। उनले रेकर्ड गराएको सन्देश अङ्ग्रेजी भाषामा बज्छ।पछि सुरु भएको अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलका लागि
सुबानी मोक्तानले पनि आफ्नो स्वर दिएकी छन्। अनुपमा कर्माचार्यले केही अन्य विज्ञापनमा पनि स्वर दिएकी छन्। हाल उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आबद्ध छिन्।भूमिका थापा पहिला रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थिन् भने सुबानी मोक्तान गायिका हुन्। -बिबिसीबाट***थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*
Prevहार्दिक बधाई : चीनले गर्यो बाचा पुरा , नेपाललाई दियो २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर !
Nextनयाँ रेकर्ड : नेपालमा आज एकै दिन अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित को कोरोना संक्रमण बाट मृ’त्यु !
प्रचण्डकि पत्नि सिता दाहाल लाई अस्पताल लगियो अवस्था गम्भीर